मधेसको जनमत महन्थ कि उपेन्द्रको पक्षमा ? Nepalpatra मधेसको जनमत महन्थ कि उपेन्द्रको पक्षमा ?
काठमाडौँ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अबको एक वर्षमा हुँदै छ । यसैबीच नेपाली राजनीतिक वृतमा मधेसको जनमत कसको पक्ष हुने चर्चासमेत सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै मधेसको सशक्त पार्टी विभाजन भएको छ ।
‘महन्थजी परिपक्व र सादगी नेता हो । उहाँ अकस्मात राजनीतिमा नआएको र अरूहरू भने २०६२/६३ पछि राजनीतिमा आएकाले महन्थको तुलना अन्यसँग हुनै सक्दैन,’ नेता शुक्लले भने । अहिले पनि मधेसका मुद्दा ठाकुर–महतोले नै बोक्ने भएकाले मधेसको जनमत पनि उनीसँगै रहेको जिकिर उनले गरे ।
जसपाका नेता एवं बुद्धिजीवि सत्यनारायण मण्डलले मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि नेताहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको बताए । विभाजित भएर मधेसका मुद्दा सम्बोधन नहुने बताउँदै उनले अहिले पनि केही नबिग्रेकाले नेताहरूले आत्मालोचना गर्दै पार्टीलाई एकजुट बनाउनुपर्ने बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले लेखेका छन् ।